कोरोनाको वास्तविक त्रासभन्दा मिडियाले फैल्याएको भ्रमपूर्ण त्रासले जनतालाई आतंकित बनायो – रबि::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
कोरोनाको वास्तविक त्रासभन्दा मिडियाले फैल्याएको भ्रमपूर्ण त्रासले जनतालाई आतंकित बनायो – रबि
कोरोनाभाइरस जस्तो जनस्वास्थ्यबारे महत्वपूर्ण बिषयमा भ्रम छर्ने मिडियालाई बहिष्कार गर्न रविको बिशेष अपिल
बिहि, फाल्गुन २२, २०७६
‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ५०४ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
कोरोना अपडेट : बजारमा मास्क अभाव, हात नमिलाउने प्रदेश सरकारको निर्णय- चीनको वुहान शहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वका ७० भन्दा बढी देशहरुमा फैलिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण विश्वभर हालसम्म ३ हजार २ सय मानिसको ज्यान गइसकेको छ, भने ९५ हजार भन्दा बढीमा यसको संक्रमण फैलिएको छ ।
छिमेकी मुलुक चीनमा दिनप्रतिदिन संक्रमण फैलिदै गएको समयमा नेपाल पनि यसको ठूलो जोखिममा रहेको भन्दै सजग रहन विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुरोध गरेको छ ।
अस्पताल भन्छ, ‘कोरोनाकाे आशंकामा भर्ना भएर भागेको भनिएका बिरामीमा कुनै संक्रमण भएको छैन’– कोराना संक्रमणको आशंकामा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएर भागेको भनिएका बिरामीमा कुनै पनि संक्रमण नभएको पाइएको छ ।
दक्षिण कोरियाबाट फर्केका उनी भागेको भनिएपनि परीक्षणको रिपोर्टमा कुनै पनि संक्रमण नभएको पाइएको हो । सुनसरी घर भएका उनलाई विमानस्थलमा जांच गर्दा ज्वरो देखिएको थिएन । तर, पनि आशंका गरिएकाले आइसोलेसन वार्डमा राखिएका उनी आज अपराह्न भागेका थिए ।
संक्रमित क्षेत्रबाट नेपाल आएकाले सुरुदेखि नै उनी बढी त्रसित देखिएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप वास्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।
संक्रमित क्षेत्रबाट फर्किएका नेपालीहरु संक्रमण भएका भन्दा पनि आशंकामा अस्पताल आउने धेरै रहेको पाइएको छ । आशंकामा आएका सवैलाइ चिकित्सकले काउिन्सलिङ्ग गर्ने गरेको आश्वास्त हुनेलाइ घर फर्काउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।
भत्किएको पुलमाथि नै नयाँ पुलको ढलान !
तनहुँ, २२ फागुन । तनहुँको पर्यटकीय क्षेत्र बन्दिपुरस्थित फूदी खोलामा १० बर्ष पहिले निर्माण गरिएको पुल भत्किन थालेपछि गाँउपालिकाले करीब १० लाख रुपैयाँ छुट्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत पुनर्निर्माण सुरु गरेको छ ।
तर, उक्त पुल पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा भत्किएकै पुलमाथि नयाँ संरचना बनेपछि स्थानीय झन् जोखिममा परेका छन् ।
उक्त पुल पुनर्निर्माणका लागि जग पनि खनिएको छैन, त्यस्तै पिल्लर पनि उभ्याइएको छैन र ढलान पनि गरिएको छैन । पूरानै ग्याबिन जाली र भत्किएकै पुलको संरचनामा नयाँ पुल ढलान गरिएको छ ।
पुलको यस अवस्थालाई लिएर स्थानीयले हामीलाई गुनासो गरेपछि हामीले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बिष्णु गुरुङलाई प्रश्न गरेका थियौं । उनले नगरपालिकाका इञ्जिनियरको स्टिमेट अनुसार नै पुल पुनर्निर्माण गरिएको दाबी गरे ।
निर्माणाधीन फुदी खोलाको उक्त पुलले तनहुँको सिमल्टारबाट बन्दिपुर–धारापानी–सिमल्टार–कुवादी–कुकुर्दीलाई जोड्नेछ ।
कोरोना आइसोलेसनमा एकैदिन ३ जनाको मृ’त्यु, स्वाब परीक्षण गरिँदै